विजनेश-फिचर :: OnlineKhabar.com - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview
Online Khabar Business
दशैं-तिहारमा मोटरसाइकल किन्दा उपहारै उपहार
१० असोज, काठमाडौं । दशैं तथा तिहार नेपाली उपभोक्ताहरुका लागि आफुलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाहरु खरिद गर्ने चाडपर्व हुन् । चाडपर्वमा कम्पनीहरुले आकर्षक उपहार तथा नगद छुट प्रदान गर्ने हुँदा पनि उपभोक्ताहरु आफुलाई...
दुई पाङ्ग्रे सवारीमा विशाल ग्रुपको प्रवेश
७ असोज, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका खुद्रा उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणमा चर्चित व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुपले जापानिज ब्राण्डको सुजुकी मोटरसाइकल बिक्री वितरण शुरु गरेको छ । ग्रुपले सुजुकी मोटरसाइकल इण्डियाले उत्पादन गरेका सुजुकी मोटरसाइकल...
नागदहमा डेटिङ, बोटिङ र फिसिङ (फोटो फिचरसहित)
६ असोज, काठमाडौं । डुङ्गा चढ्ने भन्ने वित्तिकै आम-मानिस पोखराको फेवाताल सम्झने गर्छन् । दैनिक हजारौं स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक डुङ्गा चढ्नकै लागि भनेर पोखरा पुग्ने गर्छन् । फेवाताल पुग्नेहरुमा सबैभन्दा ठूलो पंक्ती काठमाडांै...
बीमा कम्पनीले उठाए ९ अर्ब प्रिमियम
४ असोज, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा निर्जीवन बीमा कम्पनीले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन् । गत चैतसम्म ६ अर्ब ६१ करोड प्रिमियम संकलन गरेका कम्पनीहरुले असारसम्म दुई अर्ब ४१...
सामसुङले ल्यायो युएचडी टिभी र फाइभ स्टार फ्रिज
२ असोज, काठमाडौं । कोरियन प्रख्यात इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी सामसुङको युएचडी टिभी र बीइइ ५ स्टार रेटिङ प्राप्त फि्रज नेपाली बजारमा भित्रिएका छन् । सामसुङको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता हिम इलेक्ट्रोनिक्सले नयाँ टिभी र फि्रज...
चाडपर्वमा इन्डेक्स फर्निचरको छुट अफर
१ असोज, काठमाडौं । यदि तपाई प्रसिद्ध विदेशी कम्पनीका फर्निचरहरुको खोजीमा हुनुहुन्छ भने खुसीको खबर छ । थाइल्याण्डको प्रसिद्ध फर्निचर कम्पनी इन्डेक्स लिभिङ मलद्धारा उत्पादित फर्निचरहरु नेपालमै ५० प्रतिशतसम्म छुटमा पाइने भएको छ ।...
कारभन्दा महंगा बाइक ‘नाडा अटो शो’ मा
२७ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा महंगा मोटरसाइकल चढेर हुइँकिने युवाहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । सौखिन युवामाझ मोटरसाइकल आवश्यकता मात्रै नभएर सानको साधनसमेत बन्न थालेको पाइन्छ । महंगो मोटरसाइकल चढ्ने सौखिन उपभोक्ताको संख्या बढ्न...
‘अटो शो’ मा नयाँ गाडी तथा बाइकको वहार
बुधबारदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा गाडी तथा बाइकहरुको कुम्भ मेला शुरु भएको छ । विश्वभर ख्याती कमाएका गाडी कम्पनीहरुले मेलामा सक्रिय सहभागीता जनाएका छन् । नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसियसनले आयोजना गर्न लागेको ‘नाडा अटो शो’ ३०...
डिपार्टमेन्ट स्टोर धनीका लागि मात्रै होइन : आचार्य
२४ भदौ, इटहरी । दाल, तरकारी, अचार, मिनिरल वाटरसहितको भरपेट खाना- मात्र रु ५० मा ! त्यो पनि वातानुकुलित कोठामा बसेर । महँगी आकासिएर तपाईं हाम्रै भान्सामा ५० रुपैयाँ छाकको खाना बनाउन मुस्किल पर्ने...
सौराहामा यसै वर्ष पाँच होटल थपिदै
२२ भदौ, काठमाडौं । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य चितवनको सौरहामा होटल विस्तार कार्य आक्रमक रुपमा बढिरहेको छ । यसै वर्षमात्र ठूलो लगानीका ५ वटा होटलहरु संचालनमा आउने भएका छन् । जसमध्ये सौरहामा गि्रन पार्क...
बैंकमा राख्दा झन घट्न थाल्यो पैसा
निक्षेप रकम अत्यधिक बढेपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । सामान्य बचत खातामा अधिकांश वाणिज्य बैंकले ३ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दर तय गरेका छन् । गत चैतदेखि लगातार निक्षेप बढ्दै गएको छ तर सो...
काठमाडौंको फोहोरबाट १६ मेघावाट बिजुली निकाल्ने दाबी
काठमाडौं । ६ महिनाभित्रमा राजधानी काठमाडौं लोडसेडिङबाट मुक्त ? झट्ट सुन्दा अपत्यारिलो मात्र होइन, हावादारी लाग्न सक्छ । तर, निजी क्षेत्रको एउटा कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकालाई ६ महिनाभित्रमा लोडसेडिङ मुक्त गर्न सकिने दाबी गरेको छ...
« पुराना सामाग्री
‘सौराहामा डान्स र दोहोरी रेष्टुरेन्ट खोल्न दिँदैनौं’
चितवनको सौराहाका पुराना पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ हरिभक्त घिमिरे । उहाँ अहिले जंगल सफारी लजका प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ । तीन कार्यकालसम्म क्षेत्रीय...